All important information of the STEEM user: aggamun - STEEMIT Holmes
Accounts ID: 537753
Accounts Name: aggamun
Post Count 3,751
Voting Power: 9,949
Current Mana 3,002,106,704,576
Last Post 2019-11-19T16:47:21
Last Root Post 2019-11-19T16:47:21
Last Vote Time 2020-01-25T20:01:03
Vesting Reward Balance 4,178 VESTS
Vesting Shares 2,997,118 VESTS
Recieved Vesting Shares 20,074 VESTS
Curation Rewards 21,728
Posting Rewards 798,392
စာဖတ်ခြင်းဟာ လူသားတို့အပေါ် များစွာ အကျိုးပြုတယ်။ စိတ်ကို နူးညံ့စေတယ်။ အမှားအမှန်ကိုလည်း ခွဲခြားသိမြင်နိုင်တယ်။အကြောင်းအကျိူး အကောင်းအဆိုးကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တယ်။ လောကရဲ့အကြောင်းကိုလည်း သိမြင်အောင် ဖော်ပြပေးတယ်။ စာဖတ်ခြင်းဖြင့် စာရေးသူတို့ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ခံစားချက် ဖြစ်ရပ် အတွေ့အကြုံ များကို လေ့လာနိုင်တယ်။ အများအားဖြင့် ကျွန်မက ရသစာပေကို ပိုဖတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်မက စဥ်းစားရတာထက် ခံစားရတာပိုကြိုက်တယ်။ စာဖတ်ရင်း ဇာတ်ကောင်လေးတွေကို သရုပ်ဖော်ကြည့်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်မစာဖတ်ရတာ ပိုပြီး အားရတယ်။ က ... more
2019-11-18 14:32:39 Block Num: 38,284,851
အခုဆို ကို @aggamunရဲ့ accမှာ ကျွန်မတို့တွေ စာတွေရေးတင်လာတာ ရက်တော်တော်ကြာလာပါပြီ။ကျွန်မတို့တွေလို့ သုံးနှုန်းရတာကတော့ ကျွန်မနှင်းအိခိုင်ရယ် မဟန်နီမိုးရယ် ကိုစောလွင်ရယ်ကို ဆိုလိုတာပါ။တတ်နိုင်သလောက်လေးနဲ့ steemitနဲ့ အဆင်မပြတ်အောင် ရေးတင်လာတာပါ။ အကို@aggamun ဆုံးပြီးကတည်းက ကျွန်မfacebookမှာ ရော steemitမှာရော မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကို ဆုံးသွားတာကို အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် တစ်ချို့သော အသိမိတ်ဆွေတွေက လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ သတင်းမေးနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ နာရေးကူငွေများလည်း ထည့်ဝင်ကူညီပေ ... more
2019-11-15 08:06:00 Block Num: 38,190,910
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်းမဖြစ်ခဲ့ရင် ဖြစ်မလာခဲ့လျှင် ဒေါသထွက်ကြ စိတ်တိုအလိုမကျဖြစ်လာကြတယ်။ ဒါဟာ တကယ်တော့ အတ္တကြောင့်ပါပဲ။ ကိုယ်ပေးဆပ်ခဲ့ရတာတွေ အနစ်နာခံရတာတွေ စွန့်လွှတ်ခဲ့ရတာတွေကို ပြန်ပြီးအကျိုးခံစားချင်လို့ပါပဲ။ အဲ့အခါမှာ ပူလောင်မှု သောကတွေကို အလုံးအရင်းနဲ့ ခံစားရတယ် ။ ကျွန်မလည်း အမြဲလိုလို ခံစားခဲ့ရတယ်။ နဂိုကစိတ်အားငယ်တက်တော့ ပိုဆိုးဝါးခဲ့တယ်။ဖြစ်ချင်တာ မဖြစ်လာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ ကျွန်မရင်ထဲ ဗလောင်ဆူပွတ်ခဲ့ရတယ်။ တစ်ဖက်က အေးချမ်းနေသလောက် ကျွန်မရင်ထဲ မီးများလောင်​မြိုက်နေတယ်။ အရင်က နားလည်ပေ ... more
2019-11-13 15:19:45 Block Num: 38,142,101
"Your dream is your signature".ဒီစကားလုံးလေးကို india movieကြည့်တဲ့သူဆို သိနေမှာပါ။အထူးသဖြင့် india ပညာပေးဇာတ်လမ်းလေးတွေ ကြည့်သူဆို ပိုသိမှာပါ။ ဂီသာရာနီ ကျောင်းဆရာမ အဖြစ် နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးသရုပ်ဆောင်တဲ့ကားထဲက တစ်ကားပါ။ movie nameကတော့ 'How old are you?" တဲ့။မင်းအသက် ဘယ်လောက်လဲပေါ့။ Image Credit - pixabay ဒီဇာတ်လမ်းမှာ မင်းသမီးဟာ အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့ နောက်မှာ ခင်ပွန်းနဲ့သမီးကို အချိန်ပေးရင် သူ့မှာရှိတဲ့ စွမ်းအင်တွေက ငုပ်လျှိူးသွားခဲ့ပါတယ်။ မိသားစုကိုလည်း အချိန်ပေးရင်း သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုလည်း ... more
2019-11-12 14:17:24 Block Num: 38,112,130
One of my life experience: keep to be disciplined
ကျွန်မတို့ လျှောက်လှမ်းရတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာ အခက်အခဲဒုက္ခမျိုးစုံကို ကျော်ဖြတ်ရမှာ မလွဲဧကန်ပါပဲ။ အဲ့ဒါတွေကို ကျွန်မတို့အနေနဲ့ စိတ်ရှည် သည်းခံ၍ ဖြတ်ကျော်ကြရပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ပင်ကိုယ်စိတ်ရင်းက စိတ်ဆတ် စိတ်မြန်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်လို့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆက်ဆံပြောဆိုရာမှာ အလွန်ကို ဒုက္ခရောက် ခဲ့ရပါတယ်။ အိမ်မှာ စည်းစနစ်နဲ့ နေခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မအနေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အပြုအမူတချို့က ကျွန်မစိတ်ကို ကသိကအောက် ဖြစ်စေပါတယ် ။ ကျွန်မတို့နေထိုင်ရာ နေရာက ကျွန်မအတွက် အနည်းငယ် စရိုက်ဆန်ခဲ့တယ်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်မ ပတ်ဝန်း ... more
2019-11-10 12:51:09 Block Num: 38,052,905
ယနေ့ခေတ်မှာယောက်ျားမိန်းမရင်ဘောင်တန်းလာပြီးကမ္ဘာကြီးကိုထုဆစ်ပုံဖော်ချိန်မှာတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေပါတယ်။လုပ်ငန်းအများစုကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုteam workဆိုပြီးဖြစ်လာချိန်မှာဟိုလူကိုတော့မခေါ်ချင်ဘူး ဒီလူကိုလည်းငါစကားမပြောချင်ဘူးဆိုပြီးတစ်ဦးတည်းသီးသန့်နေလို့မရတော့ပါဘူး။ "မချစ်သော်လည်းအောင့်ကာနမ်း"ဆိုသလိုပဲကိုယ်ကမခေါ်မပြောချင်ပေမယ့်တာဝန်အသီးသီးကြောင့်ခေါ်ပြောဆက်ဆံနေရမှာပါ။ထိုကဲ့သို့ပြောဆိုဆက်ဆံဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလေးကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်။ ... more
2019-11-08 14:38:09 Block Num: 37,997,548
One of my life experiences : Tell as true!
ယခု ကျွန်မသည် အသက်အရွယ်အရ ငယ်သေးသဖြင့် ဘဝရဲ့ အရသာကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှသာ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒုက္ခ သုခတစ်ချို့ကိုလည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ပါတယ် ။ သင်ခန်းစာတစ်ချို့လည်း ရခဲ့တယ်။ နောက်လည်း ကျွန်မအမျိုးမျိုး​​​သော အရာတွေကို ရင်ဆိုင်ရအုန်းမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ အဲ့ထဲကမှ ကျွန်မရရှိခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတချို့ကို ပြောပြချင်ပါတယ် ။ တစ်နေ့ ကျွန်မတို့မိသားစုတွေ ညဘက်ထမင်းထွက်စားခဲ့ကြတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်မတို့မိသားစုက အပြင်မှာ သိပ်ထွက်စားလေ့မရှိပါဘူး။ အဲ့နေ့က အဖေလစာထုပ်ရက်ဖြစ်လို့ အဖေ့ကို ထွက်ကြိုရင်း စားခဲ့ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန် ... more
2019-11-07 15:12:33 Block Num: 37,969,487
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်မအတွေးပေါက်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။တစ်ခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အရာပါ။ အတ္တ ဆိုတဲ့စကားလုံးပါ။ လူတိုင်းမှာ အတ္တရှိတယ်လို့ပြောရင် မှားတယ်လို့တော့ ပြောမယ်မထင်ပါဘူး။ရှိတဲ့ပမာဏတွေပဲ ကွာဟသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တစ်ချို့လူတွေကျတော့ ကိုယ့်မှာအတ္တရှိတယ်ဆိုတာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဝန်ခဲရဲပါတယ်။ တစ်ချို့ကျပြန်တော့လည်း ဝန်မခံရဲဘူးပေါ့။ တစ်ချို့များကျတော့လည်း အတ္တရှိမှန်းတောင် မသိကြဘူး။ အတ္တဆိုတဲ့အရာကလည်း ခက်တော့ခက်သား။ ချစ်ခင်မှုမှာလည်း အတ္တကပါနေပြန်တယ်။ မုန်းတီး မှုမှာလည်း ... more
2019-11-06 15:20:21 Block Num: 37,940,895
"about": "The more  you know, the more  you  claim.",